सिलिकन तथ्यहरू - तत्वहरूको आवधिक तालिका
सिलिकन रासायनिक र शारीरिक गुण
सिलिकन मूल तथ्यहरू
परमाणु संख्या : 14
परमाणु वजन : 28.0855
डिस्कवरी: जोन्स जैकब बर्सेलीस 1824 (स्वीडेन)
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन : [न] 3s23 पी 2
शब्द उत्पत्ति: ल्याटिन: सिलिकिस, साइइलक्स: चप्पल
गुण: सिलिकन को पिघलने बिंदु 1410 डिग्री सेल्सियस छ, उबलते बिन्दु 2355 डिग्री सेल्सियस छ, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 2.33 (25 डिग्री सेल्सियस) हो, 4. क्रिस्टललाइन सिलिकन एक धातु ग्रेले रंग छ। सिलिकन अपेक्षाकृत अचम्म छ, तर यसले पतित एल्कली र हज्जन्सले आक्रमण गरेको छ।
सिलिकन सबै अवरक्त तरंगदैर्ध्यको (95 9.7 मिमि) भन्दा 95% भन्दा बढी हुन्छ।
प्रयोग गर्दछ: सिलिकन सबैभन्दा ठूलो प्रयोग गरिएको तत्व हो । सिलिकन रोपण र पशु जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। Diatoms आफ्नो सेल पर्खालहरू निर्माण गर्न पानीबाट सिलिका निकाल्छन्। सिलिका बिरुवा राख र मानव कंकालमा पाइन्छ। सिलिकन इस्पातमा एक महत्वपूर्ण घटक हो। सिलिकन कार्बाइड एक महत्वपूर्ण अप्रासंगिक हो र लेजरहरूमा 456.0 एनएममा सहज प्रकाश उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सिलिकन डुप्लिकेस ग्यालियम, आर्सेनिक, बोरन, आदि ट्रांजिस्टर, सौर कोशिका , रिक्टिफायरहरू, र अन्य महत्वपूर्ण ठोस राज्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सिलिकॉन तरल पदार्थहरूसँग सजिलो ठोस हुन्छन् र धेरै उपयोगी गुणहरू छन्, जुन टाँसनहरू, सिलेटहरू र इन्सुलरहरूको रूपमा प्रयोग गर्दछ। स्यान्ड र मिट्टी निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सिलिका गिलास बनाउन प्रयोग गरिन्छ, जसमा धेरै उपयोगी मेकानिकल, बिजुली, ओप्टिकल र थर्मल गुण छन्।
स्रोतहरू: सिलिकनले पृथ्वीको क्रसको 25.7% बनाउँछ, वजनले, यसलाई दोस्रो सबैभन्दा प्रचुर तत्व बनाउँछ (ओक्सीजनले पार गरिरहेको छ)।
सिलिकन सूर्य र ताराहरूमा पाइन्छ। यो aerolites को रूप मा जाना meteorites को एक प्रमुख घटक हो। सिलिकन टेक्टेाइट्सको एक भाग पनि, एक प्राकृतिक गिलास अनिश्चित मूल हो। सिलिकन प्रकृतिमा मुक्त छैन। यो सामान्यतया ओक्साइड र सिलिकेटको रूपमा हुन्छ, रेत , क्वार्ट्ज, एथस्टस्ट, एगेट, चप्पल, जेस्पर, ओप्पल र सिट्रेन सहित।
सिलिकेट खनिजहरू ग्रेनाइट, हर्नबेन्डे, फिल्डस्पर, मेका, माटो र एस्बेस्टोस समावेश छन्।
तैयारी: कार्बन इलेक्ट्रोड को उपयोग गरेर सिलिकन हीटिंग सिलिका र कार्बन द्वारा एक इलेक्ट्रिक भट्ठी मा तैयार हुन सक्छ। अमूल्य सिलिकन खैरो पाउडरको रूपमा तयार हुन सक्छ, जसले पिटेको वा भाप गर्न सकिन्छ। Czochralski प्रक्रिया ठोस राज्य र अर्धचालक उपकरणहरूको लागि सिलिकन एकल क्रिस्टलहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। हाइड्रोजन को वातावरण मा हाइपरपure सिलिकन को एक वैक्यूम फ्लोट क्षेत्र को प्रक्रिया द्वारा तैयार गरिएको छ र अल्ट्रा शुद्ध ट्रिकलोसिलन को तापीय डिमोप्लेशन द्वारा।
तत्व वर्गीकरण: अर्मेटिएटिक
आइसोटोज : Si-22 देखि Si-44 सम्मको सिलिकन को त्यहाँ आइपुग्ने isotopes छन्। त्यहाँ तीन स्थिर आइसोटोजहरू छन्: अल -28, ए -29, ए-30।
सिलिकन भौतिक डेटा
घनत्व (जी / सीसी): 2.33
पिघ्ने प्वाइंट (के): 1683
उभर प्वाइंट (के): 2628
रूप: अमूल्य रूप भूरा पाउडर हो; क्रिस्टलीय फारम एक ग्रे छ
परमाणु रेडियो (pm): 132
परमाणु मात्रा (सीसी / mol): 12.1
कोभेलेंट राइडस (अपराह्न): 111
ईनिक रेडियो : 42 (+ 4e) 271 (-4e)
विशिष्ट ताप (@ 20 डिग्री CJ / g मोल): 0.703
फ्यूजन ताप (केजे / mol): 50.6
वाष्पकरण ताप (केजे / mol): 383
डेबी तापमान (K): 625.00
पॉलिंग नगरीता संख्या: 1.90
पहिलो आयोनिजिंग एनर्जी (केजी / mol): 786.0
ओक्सीकरण राज्य : 4, -4
ल्याटिस संरचना: विकर्ण
ल्याटिस Constant (Å): 5.430
सीएएस रजिस्ट्री नम्बर : 7440-21-3
सिलिकन ब्रह्माण्डमा आठौं सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा तत्व हो।
इलेक्ट्रोनिक्सका लागि सिलिकन क्रिस्टलमा हरेक अर्ब सिलिकन परमाणुको लागि एक अरब परमाणुहरूको शुद्धता हुनु पर्छ (99.9 99 99 99 शुद्ध)।
पृथ्वीको परमाणुमा सिलिकनको सबैभन्दा सामान्य रूप बालुवा वा क्वार्ट्जको रूपमा सिलिकन डाइअक्साइड हुन्छ।
सिलिकन, पानी जस्तै, विस्तार गर्दछ तर यो तरल देखि ठोस हुन्छ।
क्वार्ट्जको रूपमा सिलिकन अक्साइड क्रिस्टलहरू पाइइज्रोइलेक्ट्रिक हो। क्वार्ट्जको गुनासो फ्रिक्वेन्सी धेरै परिशुद्धता टाइमपिसमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रिन्टयोग्य आवधिक तालिकाहरू - 2015 संस्करण
क्यूबिक जिरोनाइया वा CZ के हो?
सामान्य सीजन तालिका
Nonmetals सूची (तत्व समूह)
फ्लोरेन र फ्लोराइड बीचको फरक के हो?
10 चांदी तथ्य - रासायनिक तत्व
तत्व एनएनमोनिक उपकरण - आवधिक तालिका प्रतीकहरू
धातुहरूको गतिविधि श्रृंखला: अनुमानित प्रतिक्रियाशीलता
एल्युमिनियम क्यान्सर तालिकामा कहाँ छ?
सुनको रासायनिक र शारीरिक गुण
ट्रथथेलन स्मारकका लागि स्लिभ वा स्लेभेलिस वेट्सटिटहरू?
Depositional Landforms को चित्र
फ्रान्सेलीको लागि फ्रान्सेली जान्नुहोस्: उत्तम संसाधन
रत्न र खनिज
मन्डारिन चीनियाँ टोनहरू बुझ्दछन्
के धार्मिक उपवास हिन्दू धर्म मा कुनै पनि भावना बनाउनुहुन्छ?
विश्वमा सबैभन्दा खतरनाक एसिड
मेड्रिड उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
शीर्ष अनलाइन स्ककेटबोर्ड पसलहरू
एक सेन्ट जेरोम को प्रार्थना
ईर्ष्या र ईर्ष्या
अिन हारा को बुझन
कार्बोनेटेड Fizzy फल कसरी बनाउने
इटालियन Verb Conjugations: Passare
जर्मन किशोर स्लाङ्ग
ब्ल्याक आइ आँखा भएका व्यक्तिहरूको साथमा
खगोल विज्ञान 101: आधुनिक खगोल विज्ञान
जियोडेसिक डोम के हो? स्पेस-फ्रेम संरचनाहरू के हो?
"रोमियो र जूलियट को ससुराव"
तत्वहरूको परमाणु भार
यदि तपाईं भूत हेर्नुहोस् वा सुन्नुहुन्छ भने के गर्न
Emiliano Zapata र योजना Ayala
आगमनको दोस्रो हप्ताको लागि आगमन भेडा प्रार्थना
जर्ज वाशिंगटनको पहिलो अस्तित्व
साइमन र गारफंकलको प्रोफाइल